ရှေးဟောင်းခေတ်မှ အံ့ဖွယ် အင်ဂျင်နီယာများ ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံရိပ်များ စုစည်းမှု - ONE DAILY MEDIA
— ရှေးခေတ်၏ မယုံနိုင်လောက်စရာ ဆောက်လုပ်ရေးသမားများ
လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများဖြင့် အထင်ကြီးလောက်စရာ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အီဂျစ်လူမျိုးများကဲ့သို့ ရှေးခေတ်တည်ဆောက်သူအချို့သည် ကြီးမားသော ကျောက်တုံးကြီးများကို ကျောက်ဆစ်ထွင်းထုရန်၊ သယ်ပို့ရန်နှင့် နေရာချထားရန် ခက်ခဲသော နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ကြီးမားသော ပိရမစ်များကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အာရှတွင်လည်း ရှေးခေတ်လူများက ဧရာမပိရမစ်များကို စိုက်ထူခြင်းကဲ့သို့ပင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ မက္ကဆီကိုတွင်လည်း ရှေးခေတ်လူများက ပိရမစ်များကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဥပမာ Cholula ၏ Great Pyramid သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသမျှ အကြီးဆုံးပိရမစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်းသည် အရှည်ဆုံးမဟုတ်သော်လည်း ထုထည်နှင့် အရွယ်အစားအရ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် နေရာယူထားလောက်အောင် ကြီးမားပါတယ်။
ရှေးခေတ် ဆောက်လုပ်ရေးသမားများသည် ပိရမစ်များကို စိုက်ထူရုံသာမက ၎င်းတို့၏ အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်မှာ အထင်ကြီးလောက်စရာပင်ဖြစ်ပါတယ်
— အမေရိက၏ ထူးဆန်းသောဘုရားကျောင်းများ
ကြီးမားသော ဘုရားကျောင်းများကို အံဝင်ခွင်ကျ ဘုရားကျောင်းတွေ ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့ ထူးဆန်း အဆောက်အဦတွေ လဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ဥပမာ Ollantaytambo ကိုကြည့်ပါ။
ဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသည့် တောင်များကြား ပီရူးတောင်ဘက်ရှိ ချိုင့်ဝှမ်းတွင် တည်ရှိသော ဤရှေးဟောင်းနေရာသည် ဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသော တောင်များကြားတွင် တည်ရှိပြီး စိတ် တွေဝေစရာ အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Ollantaytambo .. ဓာတ်ပုံ- Barry Everett
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့် 2,792 မီတာ (9,160 ပေ) တွင် တည်ရှိပြီး ရှေးဟောင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ၎င်းတို့၏ မယုံနိုင်စရာ ကျောက်ပန်းရံ ကျွမ်းကျင်မှု သဲလွန်စများကို ချန်ထားရာ နေရာဖြစ်ပါတယ် ။
၎င်းတို့သည် ကျောက်မိုင်းခွဲခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းနှင့် ကြိုးကိုင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ရှေးဟောင်းနေရာများထဲမှ တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
Eduardo Pi Peret Photography မှ Ollantaytambo ၏ပုံ
Ollantaytambo ရှိ ကျောက်တုံးအချို့သည် တန် ၇၀ ကျော် အလေးချိန်ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက ခေတ်မီနည်းပညာ စက်ကိရိယာ ဘီးများမရှိဘဲ ရှေးခေတ်တည်ဆောက်သူများကဖန်တီးခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဘိုလီးဗီးယားမှာ အလားတူပဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွေးစရာ အများဆုံးနေရာများထဲမှ နှစ်ခုဖြစ်သော Tiahuanaco နှင့် Puma Punku တို့၏ အပျက်အစီးများ တည်ရှိနေပါတယ်။
Puma Punku ရှိ တိကျစွာဖြတ်တောက်ထားသော မျဉ်းဖြောင့်နှင့် အပေါက်များပါရှိသော ကျောက်တုံး ။ ဓာတ်ပုံ – Wikimedia Commons
Tiahuanaco နှင့် Puma Punku တို့သည် ၎င်းတို့၏သမိုင်းကြောင်းကြောင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေရုံသာမကဘဲ နေရာနှစ်ခုလုံးသည် ကျောက်ဆစ်ပုံ‌ဖော်မှု၏ စံနမူနာကောင်းများရှိသည့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Puma Punku ၊ ဓာတ်ပုံ – pinterest
— အမေရိကမှ ပေါင်းစပ်ကျောက်တုံးများ
ဥပမာ- Puma Punku သည် လေဆာကဲ့သို့ အပေါက်များရှိသော ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြတ်တောက်ထားသော ကျောက်တုံးများကို တွေ့ရှိသည့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက ကျောက်တုံးတွေကို ဘယ်လို မွန်းမံခဲ့သလဲဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်တဲ့ ချောမွေ့တောက်ပြောင်တဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
Sacsayhuaman ဟာ ချွင်းချက်မရှိပါဘူး
Sacsayhuaman တွင် Puzzle အကွက်များလို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် အနေအထားတင်ထားသော အလွန်ကြီးမားသော ကျောက်တုံးများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရုံသာမက၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျောက်တိုင်အချို့သည် လည်း ကျွမ်းကျင်သူများကို အံ့ဩစေအောင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အမှတ်အသားများကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
Sacsayhuaman ရှိ ပေါင်းစပ်ကျောက်တုံးများ
Sacsayhuaman ရှိ ကျောက်တုံးများ၏ ပုံရိပ်သည် ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစားကို အမှန်တကယ် ခံစားရစေပါတယ်
Ollantaytambo တွင်တွေ့ရှိခဲ့သော ကျောက်တုံးများနှင့် Sacsayhuaman တို့ဟာ ကြီးမားသော Puzzle အကွက်များလိုပါပဲ။ သို့သော် ဒါဟာ တောင်အမေရိကအတွက် တော့ မထူးခြားပါဘူး။
အလားတူ နည်းစနစ်များကို Pharaohs တိုင်းပြည်များတွင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အီဂျစ်ရှိ Khafre ချိုင့်ဝှမ်းဘုရားကျောင်းတွင် အလားတူကျောက်ဆစ်ထုလက်ရာ ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Stones at Khafre’s Valley Temple
ဓာတ်ပုံ – Keith Payne
လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက အီဂျစ်လူမျိုးများသည်လည်း ဧရာမကျောက်တုံးများကို နေရာချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
The Stones of the Valley Temple
အချို့ကျောက်တုံးများသည် စာရွက်တစ်ရွက်စာ ပင် မဝင်နိုင်အောင် တိကျစွာတပ်ဆင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
— ” မဖြစ်နိုင်ခြင်း” များကိုထွင်းထုခြင်း
ရှေးလူကြီးများမှာ ကျွမ်းကျင် သောအရာများစွာ ရှိကြပြီး ကျောက်တုံးများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ကျောက်မိုင်းခွဲခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အထူးကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ် ။
အကောင်းဆုံးဥပမာမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Kailasa ဘုရားကျောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Ellora Rock Cut ဘုရားကျောင်း
ကြာလေပြီးသောအတိတ်ကာလက တည်ဆောက်ထားသော ဤဘုရားကျောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို တောင်ပေါ်မှထွင်းထုထားပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးသမားများသည် အပေါ်မှစတင်ကာ ဒေါင်လိုက် ထွင်းထုကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးဘုရားကျောင်းများထဲမှ တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ထုလုပ်ထားသည့် ကျောက်တုံးကြီးများကို ဖယ်ရှားလိုက်ကြပါတယ်။
Ellora ရှိ Rock Cut Kailasa ဘုရားကျောင်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြင်ကွင်း။
ထိုဘုရားကျောင်း ဆောက်လုပ်ရာတွင် တန်ချိန် ၂၀၀,၀၀၀ ကျော် အလေးချိန်ရှိသော ကျောက်ကုဗပေ သုံးသန်းကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် တော်တဲ့ ရှေးခေတ်လက်ရာများများလဲ ??
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ဤပရောဂျက်အမျိုးအစားများကို ကြီးမားသော ကျောက်ဖြတ်လွှများကဲ့သို့ ကြီးမားသော စက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လျှပ်စစ်မီးရှိသလို ကြီးမားသောကျောက်တုံးများကို သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း ပုံထွင်းထုပေးနိုင်သည့် နည်းပညာရှိပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပြီးနောက် ကျန်ရစ်ခဲ့သော ညီညာရှင်းလင်း သော ဖြတ်တောက်မှု နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ ကိရိယာများ မပါဘဲ ရှေးခေတ် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာက ကျောက်တုံးများကို မည်ကဲ့သို့ ထုလုပ်ခဲ့သည်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံနှစ်ပုံကို ကြည့်ပါ။
Ollantaytambo quarry. ဓာတ်ပုံ-Pinterest
Sacsayhuaman ရှိ ကျောက်မိုင်းတစ်ခု၊ အမှတ်အသားများကို ကြည့်ပါ။
ဒါကတော့ Baalbek ပါ။
မယုံနိုင်လောက်စရာ ကျောက်ပန်းရံထွင်းထုလက်ရာများ ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ တွေ့နေရပါတယ်
တူရကီမှ Hayk ၏ Urartian ခံတပ် သို့မဟုတ် Çavuştepe။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2800 ကတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်နှင့် တာအိုဘာသာတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ထွင်းထုထားသော Dazu ကျောက်ထွင်းထုများလည်းရှိပါတယ်
Baodingshan ကျောက်ထွင်းထု ၊
ဓာတ်ပုံ credit : Pinterest
အစောဆုံး ထွင်းထုခြင်းကို အေဒီ ၆၅၀ တန်မင်းဆက် အစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်တွင် ရှေးခေတ်အင်ဂျင်နီယာ၏ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ။
ဒါက နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ ဥပမာတစ်ခုပါ။
Qasr al Farid ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ Al-Ula ရှိ ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာ Mada’in Saleh ရှိ အုတ်ဂူ။ ပုံ credit – Wikimedia Commons
ဂျပန်မိခင်များ ကလေးများကို ဘာကြောင့် တွန်းလှည်းများမသုံးဘဲ ကိုယ်တိုင်ချီကြတာလဲ??